musha nyika dzakabatana Mabhirioni Elon Musk Mwana Wenyaya Nyaya Inosanganisira Untold Biography Facts
CB inopa Nhoroondo Yese yeTechnology Muchengeti anozivikanwa zvikuru nezita rezita rezita "Murume wesimbi". Our Elon Musk Childhood Story ne Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvika panguva. Kuongorora kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nyaya yehupenyu pamberi mukurumbira, mhuri yemhuri uye hupenyu hwake. Zvimwe zvakadaro, zvimwe OFF uye ON-Screen zvishoma zvichakazivikanwa pamusoro pake.
Hongu, munhu wose anoziva iye ndeimwe yevakakurumbira uye vanyanyisa vatsva vemazuva ano. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Elon Musk's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Elon Musk Mwana WeChiitiko Plus Untold Biography Facts: Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Elon Reeve Musk akazvarwa musi we 28th waJune 1981 kuPitoli muTransvaal, kuSouth Africa. Iye ndiye mukuru wevana vatatu vanoberekerwa kubatana pakati pababa vake Errol Musk (anjiniya magetsi magetsi) uye amai vake Maye Musk (muenzaniso uye mutevedzeri).
Vabereki vaElon Musk Maye naErrol.
Nyika yeAmerica, Canada uye South Africa yevanhu vakasiyana-siyana neChirungu, French Huguenot, Afrikaner / Dutch, German uye Swiss-German midzi yakakurira muPitoli, South Africa.
Ellon Musk ndewedzinza rakasanganiswa nemidzi yakasiyana. Credits: MrOwl.
Kukura muPretoria pamwe nemunun'una wake, Kimbal uye hanzvadzi, Tosca, mudiki Musk aive mwana wekutanga uye anofunga zvakadzama. Kuwedzera kwaMusk kupinza zvekuti mai vake vaitya kuti anogona kunge ari matsi.
Musk akarererwa kuPretoria, South Africa pamwe nehama dzake. Zvikwereti: CNBC.
Uye zvakare, Musk aive anofarira kuverenga uye anofarira zvemakomputa uyo akazvidzidzisa kuita chirongwa. Panguva iyo Musk anga akura gumi nembiri, akagadzira software yake yekutanga - mutambo wevhidhiyo - unonzi Blastar uye akautengesa kweinenge madhora mazana mashanu.
Elon Musk Mwana WeChiitiko Plus Untold Biography Facts: Dzidzo neKubata Buildup
Ruzivo rweMusk runosanganisira zvidzidzo zvake kuWaterkloof House Preparatory School asati afambira mberi kuenda kuBryanston High School. Akapedza chikoro chesekondari kuPretoria Boys High School.
Paaiva pamakambani akakwana Musk aiva mwana akanaka uyo akaita zvose zvaaigona kuti asazobuda mumatambudziko asi mazuva ake echikoro akaparara nevashungurudzi vakamutambudza pane chero mukana. Pamusoro pokurwisana kwakadaro, Musk akawisirwa pasi pasi petsoka dzepamhanho uye akaputika musoro wake pamba rakaoma pamatombo panguva yemadzinza. Akakurumidza kurasikirwa uye akapinda muchipatara nemhino yakakanganiswa yakagadziriswa kuburikidza nebasa remapfumbu.
Elon Musk ndiye akabatwa nevanodheerera kwenguva zhinji yemazuva ake echikoro.
Kwakazotevera kuita kwedzidzo akaona Musk akanyoresa kuQueen's University muKingston, Ontario Canada. Akadzidza kukoreji kwemakore maviri uye akazoendeswa kuYunivhesiti yePennsylvania kuUS uko kwaakawana madhigirii mune zveupfumi uye fizikisi. Mushure meizvozvo, tech prodigy yakananga kuStanford University kuCalifornia kunoteedzera PhD mune simba fizikisi asi yakasiya mushure memazuva maviri chete emakirasi kuti ive internet muzvinabhizimusi.
Elon Musk Mwana WeChiitiko Plus Untold Biography Facts: Basa Rokutanga Upenyu
Kutanga kumira munyaya iyoyo kwaiva kutanga kambani yewebhu webhutori, inonzi Zip2 Corporation mu1995. Imwe iyo yakatangwa naMusk nemukoma wake Kimbal kuburikidza nemari yakasimudzirwa kubva kune vatengi vengirozi vakagadzira uye vakatengesa Indaneti guta guru rezvinyorwa nemapepanhau ekudhinda.
Elon Musk nemukoma wake Vakatanga Zip2 mu1995.
Musk akanetseka kuchengetedza Zip2 kune dzimwe nyika kusanganisira kutengesa vazhinji kurairika kwekambani kuti vashandise vatengesi vezvemari mukutsinhana mari ye $ 3.6 mamiriyoni. Zip pakupedzisira yakawana Compaq iyo yakabhadhara Musk US $ 22 mamiriyoni uye yakagadzirisa dzimwe nhengo dzebhodhi zvakakodzera.
Elon Musk Mwana WeChiitiko Plus Untold Biography Facts: Road To Fame
Kufambira mberi, Musk Uchitanga webinhare yemari yepamusoro uye yekambani yekubhadhara e-mail inonzi X.com mu 1999. Iko kambani rimwe gore rakatevera rakabatanidzwa neConfinity iyo yaiva nemari yekuendesa mari inonzi PayPal.
Pamusoro pekubatana, X.com nePayPal yakava imwe kambani inonzi PayPal ine chinangwa pakuita kambani mupiro wekubhadhara wekubhadhara pasi rose. Paypal yakazowana neBay ye US $ 1.5 mabhiriyoni ayo US $ 165 mamiriyoni aibhadhara kuMusk.
Elon Musk nemumwe wevatangi vePayPal Peter Thiel. Zvikwereti: QZ.
Elon Musk Mwana WeChiitiko Plus Untold Biography Facts: Simuka Mukurumbira
Musk akanga asingazivikanwi kusvikira atanga kambani yake yechitatu inonzi Space Exploration Technologies kana SpaceX mu2002. Iko iyo inenge iine maMusk inotanga rocket teknolojia uye inovaka spacecraft yekutengeserana nzvimbo yekufamba.
Elon Musk nevashandi vekutanga veSpaceX vanopemberera yavo yekutanga hofisi nzvimbo ine mariachi bhendi muna 2002. Credits: Business Insider.
Pamberi peAsiaX inogona kunyatsogadziriswa mu 2008, Musk akabatanidzwa Tesla Motors iyo iye chete ndiye mugadziri wemhizha. Kuburikidza neT Tesla, Musk mazano emotokari dzemotokari dzinoshandisa simba rinogona kushandiswa nehuputi hwemagetsi hunoshandiswa. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Musk akabatana yakavambwa Tesla Motors mu2008 uye ndiye ega chigadzirwa dhizaini kusvika nhasi
Elon Musk Mwana WeChiitiko Plus Untold Biography Facts: Ukama Hupenyu
Musk ndiye nyanzvi yekurekora kubudirira nemhando dzakasiyana-siyana dzakagadzirirwa kuita nyika ive nzvimbo yakanaka. Zvisinei, kuva muvezive nekuchengetedza hukama hunoita seve rocket yesayenzi yemusunguri we rocket teknolojia. Tinokutaurirai nezvemhuri yake yakakundikana uye hukama huripo.
Kuroorana naJustine Wilson.
Musk akatanga kuroorwa nemunyori weCanada, Justine Wilson. Vakatarisana vakaroorana ndokutanga ndokutanga kufambidzana panguva yekudzidza kwavo pa Queen's University kuCanada Ontario. Vakatora ukama hwavo kune imwe nhanho inotevera nekuroora mu2000.
Elon Musk nemukadzi wekutanga Justine.
Muchato wavo wakakomborerwa nevanakomana vatanhatu. Chokutanga waiva Nevada Alexander (akaberekerwa 2002) akafira kubva kuSIDS (Sudden Infant Death Syndrome) apo aingova nemavhiki e10 chete. Vamwe mapatya: Xavier naGriffin (akaberekerwa 2004) uye katatu: Damian, Kai, uye Saxon (akaberekerwa 2006). Musk neJustine vakanga vasina kutarisirwa kuva pamwe nekusingaperi sezvavakaunza makore avo gumi ekuroorana kusvika pakuguma mu 2008.
Kuroorana naTalulah Riley.
Asingadi kugara ari oga, Musk akatanga kufambidzana British actrice Talulah Riley mu 2008. Doo akafamba pasi parutivi mu2010 asati abuda kunze kwemubatanidzwa wemakore maviri gare gare.
Elon Musk nemukadzi wechipiri Talulah Riley.
Sezvo vasina chokwadi nezvezvavaida, VaMusk naTalulah vakabvisa rusununguko rwavo muna July 2013 asi vakarambana muna December 2014. Vakanga vadzoka pamwe chete pfupi kusvika ku2016 apo goodbyes yaive nechinangwa cheicho muupenyu hwavo. Achienda mberi, Musk aive neshamwari yemukomana naJohn Depp, mukadzi wechitendero Amber Heard pakati pe2016 ne2017.
Elon Musk hukama naAmber Heard.
Iye iye zvino ane hukama neCanada muimbi, Claire Elise Boucher AKA Grimes. Vakaroorana avo vakatanga kutamba nechekupedzisira 2017 vakaita sarudzo yavo yekutanga paZimbabwe 7th yaMay 2018 paMet Gala. Zvinotarisirwa kuti Grimes ine zvose zvinotora kuti Musk afare.
Elon Musk nemusikana Grimes. Credits: Bhizinesi Insider.
Elon Musk Mwana WeChiitiko Plus Untold Biography Facts: Upenyu hweMhuri
Musk akaberekerwa mumhuri ye5. tinokuudza mashoko echokwadi nezvemhuri yemhuri yake.
Nezve Baba vaElon Musk: Errol Graham Musk ndiye Baba vei teknolojia yekudzivirira. Ndiye mupfumi weZimbabwe wekuSouth Africa uye akashanda semagetsi ekugadzira magetsi. Eroll akaparadzaniswa kubva kuna Musk Amai apo muchengeti aive akwegura 10.
Baba vaMusk Eroll ndeyeNyika yeSouth Africa.
Musk anosarudza kugara nababa vake muSouth Africa mushure mekuparadzaniswa, danho iro raakazobvuma achidemba kutsanangura Errol semunhu anotyisa. Zvikonzero zvehukama hwaMusk hwakagurwa nababa vake miganho pakuti Eroll aive akaoma mukurera Musk nevanin'ina vake kusvika pakurwadzisa.
Nezve Amai vaElon Musk: Maye Haldeman ndiamai vaMusk. Iye muenzaniso uye anobudirira dietologist. ICanada National yakauya kuSouth Africa mu1950 ndokusangana nababa vaMusk panguva yavo yekudzidza pachikoro chepamusoro muPretoria. Kusiyana naEroll, Maye ari kugara kuvana vake kusanganisira Musk uyo akaramba kuenda kukoreji yeSouth Africa kuitira kuti asanganiswe zvakare naamai vake kuCanada.
Elon Musk naamai vake vanogara Maye Musk.
Nezve Elon Musk's Siblings: Musk ane vana vemunin'ina vaviri vanoberekwa nekubatana pakati pebaba naamai vake. Vanosanganisira munun'una wake Kimbal uye hanzvadzi yake duku Tosc. Kimbal, akaberekwa musi wa 20th waSeptember 1972 akakwira naMusk uye akabatanidzwa ZIKNNUMX Corporation pamwe naye mu2. Iye zvino ari muzvinabhizimisi akagadzikana anonyanya kugadzira zvokudya zvakananga kubva kuvarimi uye achiuyisa kutafura yemisha yakawanda.
Elon Musk munin'ina mukoma Kimbal.
Tosca, akaberekwa musi we 20th yaJuly 1974 ndiye anopa mupepeti mupepeti. Runako uyo akakurirawo naMusk anewo mafilimu ekugadzira studio muLos Angeles. Iye zvino iye akaroora nevana.
Elon Musk Mudiki Sista Tosca.
Nezve Elon Musk's half Siblings: Musk ane vatatu-vanun'una vakaberekwa nehukama hwababa vake hunotevera. Ivo vanosanganisira Alexandra Musk, Asha Rose Musk naElliot Rush. Alexandra Musk akazvarwa mu1993 yehukama hwababa vaMusk akatevera uye akadzidza sainzi yeEnharaunda muYunivhesiti yeColorado Boulder Chinyanyo kuzivikanwa nezve Musk mumwe wehafu-mukoma Asha Rose Musk.
Musk wehafu-hanzvadzi Alexandra Musk.
Elliot Rush ndiye mukoma waamai vaMusk vakazvarwa naErrol's 'inonyadzisa nyaya' nemwanasikana wake wehafu Jana Bezuidenhout. Zvinoenderana naErrol ': "Zvakaitika rimwe zuva manheru apo mukomana waJana akamukanda kunze kwemba uye iye aive arara pamusoro pemba wangu". Akaudza pepanhau raReport. "Unofanira kunzwisisa - ndave ndisina kuroora kwemakore makumi maviri uye ndinongova murume anokanganisa."
Elon Musk wehafu mukoma Elliot Rush naamai vake Jana Bezuidenhout (Errol's hafu-mwanasikana).
Nezve Hukama hwaElon Musk: Achienderera kunhengo dzemhuri yekuwedzera yaMusk, sekuru vake amai vake vaive vekuAmerican-vakaberekerwa kuCanada vanonzi Dr Joshua Haldeman. Ana tete vanonzi Kaye Rive. Iye ndiye mapatya hanzvadzi yaMusk amai vaMaye. Kubudikidza natete Kaye Rive, Musk ane hama mbiri; Peter naLyndon Rive waakapa kutonga kuzere kwekambani yake SolarCity. Musk zvakare ane nhanho-amai vanonzi Heidi-Mari Musk. Ndiye amai vekubereka vaAsha Rose Musk naJana Bezuidenhout uyo Eroll akamupa nhumbu.
Elon Musk Mwana WeChiitiko Plus Untold Biography Facts: Zvimwe Zvako
Chii chinokonzera Musk kutsigira? gara shure apo isu tichikuunzira maitiro ehupenyu hwake kuti akubatsire kuva nemufananidzo wakazara wake. Kutanga, Musk persona inosanganiswa neItJ (Introversion, Intuition, Thinking, Judgment). Iye haana unemoyo, kuzvidzora uye kuzvikurudzira kuita zvinangwa zvake zvinopesana nematambudziko ose. Somugumisiro, anorarama hupenyu husina kuenzana hunozivikanwa nehupenzi kwenguva refu yekushanda.
Elon Musk anoshanda asingasviki maawa makumi masere pasvondo.
Pachiedza chakajeka, Musk anoziva kupemberera kubudirira uye anozvitsaurira chikamu chemaawa ake akapiwa 24 kuverenga, kuteerera mimhanzi nekuona mafirimu. Anotambawo mitambo yemavhidhiyo, anobhakwa ma cookies zuva reSvondo mangwanani uye anonyengera kunze nemhuri yake neshamwari.
Elon Musk Mwana WeChiitiko Plus Untold Biography Facts: Lifestyle
Nekufungidzirwa kwemari inokwana $ 22.8 mabhiriyoni, musk anorarama hupenyu hwemabhiriyoniyoni anoshandisa mari uye anoita kunge ane zvakawanda kupfuura zvaanogona kurarama nazvo. Kutanga, Mutungamiri Mukuru haaiti pasi pe $ 70 mamiriyoni ezvokugara zvekugara muBel-Air musha weLos Angeles. kusanganisira 20,248-square-foot-mansion mansion inokwana $ 17 mamiriyoni munharaunda.
Elon Musk Mansion $ 17 mamirioni edzimba kuBel-Air nharaunda yeLos Angeles.
Kuwedzerwa kune izvozvi zvivako zvinopararira kumakondinendi uye zviwi zvenyika. Ichingova nyaya yenguva asati azvigadzira paradhiso pachake muMaris. Kuva mutungamiriri uye muumbi weTesla Cars chete, Musk anoziva uye anowana hi-tech motokari dzinokurudzira huchenjeri hwake hutsva. Hazvishamisi kuti motokari dzake dzinosanganisira motokari yeLotus Esprit inoshandiswa mumusimbe weBames Bond. Iye anewo motokari mbiri dzemotokari: Jaguar E-Type Series 1 Roadster uye Ford Model T.
Elon Musk ane mota mbiri-dzinoshandisa gasi mune yake yekuunganidza. Credits: Bhizinesi Insider.
Elon Musk Mwana WeChiitiko Plus Untold Biography Facts: Untold Facts
Musk yakabuda mumitambo yakawanda yerevhizheni kusanganisira Simpsons uye Big Bang Theory. Mukuwedzera, akabudisa mafirimu akawanda akasiyana nefirimu ye2005 Ndinokutendai Nokusvuta.
Elon Musk muchikamu cheBig Bang Theory.
Kunyange zvazvo akafanirwa ne $ 23 bhiriyoni, musk haana kumbobhadhara mubhadharo kubva Tesla. Anowedzera mari mabhiriyoni emadhora emari kubva kuna Tesla kuti aongorore.
Musk akanga ari mu2010 akapa Gold Space Medal kubva kuFédération Aéronautique Internationale. Mubairo ndiyo kukudzwa kukuru mumhepo uye nzvimbo yepasi. Vagashiri vekare vakapiwa muchengeti anozivikanwa wekuAmerica Neil Armstrong naJohn Glenn. Uyu mubayiro unofanirwa naMusk uyo ari kushanda pakugadzira hutori hwevanhu pa Mars.
Elon Musk's SpaceX iri kuvandudza reusable rocket-spacehip system inonzi BFR kubatsira kuita kuti Mars igadzikane mune zvehupfumi.
Iye ari mumwe wevanhu vakawanda vanoita mabhiyoniyoni mabhiriyoni aya akasaina Giving Pledge. Nokusayina chibvumirano, Musk anovimbisa kugovera huwandu hwoupfumi hwake kupa hupiro hwehupi. Notable tech vashambadziri vakanyorawo pledge vanosanganisira Bill Gates, Mark Zuckerberg, Pakati pevamwe.
Izvo zvekupedzisira kwezano rake rutsva iro razvinofanira kuitika zvino the Hyperloop, nzira itsva yekufambisa iyo inogona kutora vanhu kubva kuSan Francisco kuenda kuLos Angeles muhafu yeawa kuburikidza nematope ane simba.
Mufananidzo wekufungidzira kweMusk yakarongwa Hyperloop.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Elon musk Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!
Yakagadziridzwa zuva: Zvita 26, 2020